Tag: Isticmaalka isticmaale hal abuur leh » Martech Zone
Tag: adeegsi hal abuur leh
Jimce, Maarso 20, 2020 Khamiis, Maarso 19, 2020 Brian Bowman
Waqtiga Akhrinta: 7 daqiiqo Waxaa jira daraasiin siyaabood oo lagu wanaajiyo waxqabadka ololaha. Wax kasta oo ka soo baxa midabka wicitaanka ilaa badhanka ficilka si loo tijaabiyo barxad cusub ayaa ku siin kara natiijooyin wanaagsan. Laakiin taasi micnaheedu maahan UA (Qaadashada Isticmaalaha) taatiko kasta oo aad ku dhex mari karto ayaa mudan inaad sameyso. Tani waa run gaar ahaan haddii aad haysato ilo kooban. Haddii aad ka tirsan tahay koox yar, ama aad haysato caqabado xagga miisaaniyadda ah ama waqtiyo cidhiidhi ah, xaddidnaantaasi ayaa kaa horjoogsan doonta inaad isku daydo